Zavakanto 3D misy kofehy tsy manam-petra noforonin'i Nimmalaikaew | Famoronana an-tserasera
Mpanakanto Thai 33 taona Uttaporn Nimmalaikaew mandoko Sary 3D misy sosona kofehy maro ary tamba-jotra izay hisarika ny sainao amin'ny fijerena sary matoatoa amin'ny fiantraikany voalohany vokariny.
Tsy nahy ity teknika ity tamin'ny taona 2001, raha nandalina tao amin'ny Oniversiten'i Silapakorn any Bangkok izy, dia nahatsikaritra faritra misy loko amin'ny moka. Tsy ela dia tsapan'i Nimmalaikawe izany afaka mamorona ny fahatsapana ny halaliny sy ny habeny amin'ny alàlan'ny fampifangaroana sosona kofehy marobe, tahaka ny ataony ankehitriny amin'ny tolokevitra kanto isan-karazany ampiasainy amin'ity teknika manokana ity.
«Nanomboka tamin'ny sary hosodoko nomerika misy tsipika roa mifangaro amin'ny endrik'olombelona"Manazava i Nimmalaikaew." Ny sary nomerika dia vita pirinty hametraka ny fototry ny endrika sy ny endriny. Ny sosona manaraka dia hosodoko amin'ny menaka amin'ny «style tulle painting». Rehefa nandeha ny fotoana dia fantany fa ity karazana sary hosodoko ity dia mitaky fomba hafa hamoronana hazavana sy alokaloka azo tanterahina ho an'ilay fitaovana.
Ny sosona ambony dia manome ny pitsopitsony mba hamoronana fiheverana optique. dia mampifandray ny sosona tsirairay amin'ny tsipika copolymer hahazoana antoka fa ny zava-drehetra dia manana endrika mitovy ary afaka mamorona ny fahatsapana ny halalin'ilay sary.
Sangan'asa kanto tena mahaliana izay mitarika anay amin'ny fiheverana diso, sary matoatoa toa tsy misy ary ireo endrika sy tarehin'olombelona izay mbola mijanona ho vato eo imason'ny mpijery.
Ity mpanakanto Thai ity mitondra antsika any amin'io 3D io izay hitantsika amin'ny sarimihetsika, solosaina ary console hiezaka ny hanahaka azy amin'ny tena sary toa ireo izay zarainay eto ary mametraka antsika eo alohan'io teknika hitany sendra na vintana io, iza no mahalala.
Ianao dia manana ny tranonkalanao y ny facebook-nao hanakaiky kokoa ny asany sy ny tetik'asa vaovao, izany azo antoka fa hisy ary maro, noho ny fahatanorany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto Thai no mamorona kanto 3D amin'ny alalàn'ny sary hosodoko amin'ny kofehy sy harato